Semalt: Fametrahana tranonkala iray amin'ny ordinateranao na android Phone
Na miaro ny zanakao ianao na manafina ny fampahalalana manokana, dia misy fomba sasantsasany hanakana ireo tranonkala tsy fantatra amin'ny solosainao na ny fitaovana findainao. Maro ireo olona no miahiahy momba ny tsiambaratelo an-tserasera ary te hanakana tranonkala sasany mba hiantohana ny fiarovana azy ireo sy ny zanany. Ireo tranonkala sasany dia mety ahitana sy manaparitaka viriosy, malware, ary bots. Misy ny fahafaha-misafidy ihany koa ny votoaty mampikorontana na misy olona afaka mangalatra ny mombamomba anao manokana. Mazava ho azy, afaka misoroka ireo tranonkala ianao, saingy tsy izany no safidy maharitra, ary tsy maintsy mandray fepetra henjana koa ianao.
Manakana tranonkala iray amin'ny Windows Computer:
Max Bell, ny Semalt Manager Success Manager, dia milaza fa misy fomba maro hanakanana tranonkala iray, ary afaka mifidy ny fomba mifototra amin'ny navigateur, ny router'ny tambazotra, ary ny fiasa manontolo rafitra. Ny rafi-piaraha-monina goavana amin'ny aterineto dia rafitra DNS izay mandika tsotra sy mora mahatsiaro anarana toy ny www.google.com sy ny adiresy IP. Raha mampiasa ny DNS server ianao mba hahatongavana any amin'ireo tranonkala, ny solosainao dia hanana zavatra fantatra amin'ny anarana hoe ny tahiry Hosts. Ity rakitra ity dia ampiasaina hanesorana ny fidirana amin'ny tranonkalan'ny mampiahiahy. Ity fomba manaraka ity dia mahomby ho an'ny Windows 7 sy Windows 8 mpampiasa:
Mila miditra amin'ny fizotran'ny ordinateranao ianao ary manasonia mampiasa ny anaranao sy ny tenimiafinao, ary mandehana any amin'ny C: \_ Windows \_ System32 \_ drivers \_ etc.
Tsindrio amin'ny rakitra mitondra ny lohateny hoe mpampiantrano ary misafidy ny Notepad amin'ny lisitry ny programa. Tsindrio ny bokotra Ok ary alaharo ny rakitra.
Any amin'ny faran'ity rakitra ity dia tsy maintsy ampidirinao ireo URL izay azonao atao ny manakana. Noho izany dia afaka manampy andalana vitsivitsy ianao amin'ny faran'ity rakitra ity, miaraka amin'ny 127.0.0..2. Dia tsy maintsy manoratra ny anaran'ny tranonkala ianao ary manakana izany.
Manakana tranonkala iray amin'ny telefaonin'ny Android:
Ho an'ny mpampiasa Android, misy toro-hevitra vitsivitsy sy zavatra tokony hotadidinao. Raha manana ny fakan-tsainao ianao, ohatra, dia azonao atao mora foana ny manakana ireo tranonkala amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny rakitra Hosts ao amin'ny fitaovana ary mandefa ireo hackers amin'ny pejy hafa. Noho izany dia mila mpitantana ny rindrankajy sy ny tonian'ny lahatsoratra ianao. Ny safidy tsara indrindra dia ny fampiasana ny ES File Explorer, izay mamela antsika hanao asa maro amin'ny fotoana iray ihany.
Atolory ny ES File Explorer ary tadiavo ny bokotra eo an-tampony.
Ao amin'ny ordinatera dia ahitanao ny rakitra antsoina hoe Mpanome. Tsy maintsy misintona ianao ary mandehana ao amin'ny menus pop-up. Tsy maintsy tonga any amin'ny safidin'ny ES Note ianao
Tsindrio ny bokotra hanova sy hanitsiana ny rakitra. Eto ianao dia tsy maintsy manoratra ny URL sy ny anaran'ny tranokala tianao halaina.
Aza adino ny manova ny DNS, ary soketo ny 127.0.0.2 www.blockedwebsites.com ao amin'ny tsipika vaovao.
Atsaharo ny telefona Android raha vao vitanao ny zavatra voalaza etsy ambony
Raha tsapanao fa tena sarotra ity fomba fitsaboana ity, tokony hampidirinao ny app antivirus toy ny Trend Micro izay hamela anao hanakatona ireo tranonkala ahiahiana ho azy. Tsy maintsy mametraka an'io app ity fotsiny ianao ary mametaka azy io. Mandehana any amin'ny Options> Safe Zone ary miaraha amin'ny Control Controller. Eto dia tsy maintsy kitika ianao ary mametraka kaonty. Raha vao noforonina ny kaonty, dia azonao atao ny manonona izany ho lisitra voasakana ao amin'ny fampiharana anao ary ampidino ireo tranokala azonao androsoana amin'ny fotoana iray Source .